Halyeygii hore ee Chelsea Michael Essien oo ka hadlay Sheekada Hazard iyo Real Madrid – Gool FM
Halyeygii hore ee Chelsea Michael Essien oo ka hadlay Sheekada Hazard iyo Real Madrid
(London) 10 Okt 2018. Waxaa isa soo taraya wararka Eden Hazard la xiriirinaya Real Madrid kaddib markii uu laacibka markale si ganbasho la’aan ah u qiray inuu ku riyoodo kooxda ka arrimisa Bernabeu.
The Sun ayaa tilmaamtay in Los Blancos ay dooneyso inay u soo dhaqaaqdo Saxiixa Hazard bisha Janaayo marka uu dib u furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda si ay u xoojiso rajadeeda Champions League ee ah inay ku guuleysato markii afaraad oo xiriir ah.
Laacibkii hore ee Chelsea Michael Essien oo tababarka la qaadanayay kooxda labaad ee Chelsea maadaama uu koox raadis yahay ayaa ka hadlay sheekada Hazard iyo Real Madrid.
“Eden Hazard wuu ku faraxsan yahay Chelsea aad arkeyso, wuxuu qaadanayaa xilli ciyaareed fiican,” Essien ayaa sidaa yiri.
“Waxaan dhammaan rajeynaynaa inuu kooxda la sii joogi doono ilaa dhammaadka kal ciyareedka waxaan kaloo rajeynaynaa inuu nala sii joogi karo waqti dheer.
“Waxaa had iyo jeer jira qiyaas fikradeed ku saabsan mustaqbalkaaga marka aad si fiican u ciyaarto, intaa kaddib waxay bilaabayaan inay kula xiriiriyaan Magacyo waa wayn. Haddii uu ku faraxsan yahay Chelsea maxaa diidaya inuu sii joogo?.”.
Marcos Alonso oo u Deyriyay Real Madrid iyo Barcelona